Ibsa Dhaabbatummaa Ayyaana Waggaa 23ffaa Hundeeffama Dhaabbata Dimookraatawaa Ummata Oromoo Ilaalchisuudhaan Koreen Jiddu Galeessaa DhDUO baase
Qabsoo bara dheera ummata Oromoo karaa Sirrii qabsiisee hogganuudhaan boqonnaan qabsoo hidhannoo injifannoon xumuramee boqonnaan seenaa haarayaa mirgaafi kabajaan ummatichaa itti mirkanaawe akka banamu wareega olaanaa kan kaffalee fi ummanni Oromoo haala mijjaawaa isaaf uumameen fayyadamee daandii guddinaarra injifannoodhaan tarkaanfachaa yeroo seena qabeessa kanarra akka ga’u shoora hoggansaa bakka bu’iinsa hinqabne kan raawwate Dhaabbanni Dimookraatawaa Ummata Oromoo (DhDUOn) guyyaan itti hundeeffame barana waggaa 23ffaaf sirna ho’aan kabajamaati jira. Waggaa 23 dura, Bitooteessa 17 DhDUO hundeessuudhaan gochi boonsaan raawwatame sochii qabsoo ummata Oromoo keessatti dhaabbanni siyaasaa warraaqaa fi dimookraatawaan toora qulqulluu qabate kan itti hundaa’eefi dhaabba siyaasaa qabsoo ummatichaa sirriitti hogganuu danda’u dhabuudhaan rakkoo mudatee ture kan hiike, ummata Oromoo Obboleewwan isaa ummatoota Itoophiyaa irraa adda baasuudhaan maqaa bilisummaa Oromootiin bittaa cunqursaa haarawaaf saaxiluuf daba xaxamee ture kan fashaleessee fi ummanni Oromoo sabaaf sab-lammoota Itoophiyaa kanneen hafan wajjin irree isaa gurmeessee Itoophiyaa haaraya walqixxummaa fi tokkummaa dimookraatawaa ijoollee isheetiin ijaaramtu hundeessuu keessatti ga’ee isaa akka gumaachu kan dandeessise waan ta’eef gocha seenaa keessatti iddoo olaanaa qabuudha.
Kanaafuu, guyyaan DhDUOn itti hundaa’e ayyaana injifannoo seenaa ummata Oromoo keessatti haala addaatiin kabajamuudha. keessattuu, ayyaanni kun miseensotaafi deeggartoota dhaaba keenyaa, akkasumas ummata Oromoo maraafi sabbaaf sabalammoota naannicha keessa jiraatan hunda biratti hiikkaan qabu baayyee guddaadha.
Waan kana ta’eefiis, guyyaan dhaabni keenya DhDUOn itti hundaa’e guyyaa ummanni naannoo Oromiyaa fi miseensotaa fi deeggartoonni dhaaba keenyaa qabsoo farra hiyyummaa cimsanii itti fufuufi biyya keenya biyyoota galii jiddugaleessaa argatan wajjin qixxee hiriirsuuf mul’ata akka biyyaatti qabame milkjeessuuf waadaasaani itti haaroomsan ta’ee kabajamaa tureera. Ayyaanni waggaa 23ffaa hundeeffama DhDUO kun kan kabajamu ammoo biyyi keenya Itoophiyaan hoggansa siyaasaa cimaa argattee bu’uura haaraya irratti akka ijaaramtuu fi daandii haaroomsaarra injifannoodhaan akka tarkaanfattu adda durummaan hogganaa kan turan dura taa’an keenya jaalatamaan jaallee Mallas Zeenaawii yeroo itti wareegamanii fi mul’ata isaanii milkeessuuf dhaabaa fi ummanni keenya ciminaan sochoo’aa yeroo itti jiran keessatti waan ta’eef kan addaatiifi seena qabassummaa olaanaa kan gonfateedha.
Kana malees, ayyaanni hundeeffama DhDUO kan baranaa kun kan kabajamu yaa’iiwwan dhaaba keenya DhDUO fi ADWUI eega adeemsifaman booda ta’uunsaa ayyanicha miidhagina guddaa gonfachiiseera.
Kanaafuu, Dhaabni keenya DhDUOn ayyaana guddaafi seena- qabeessa kana yeroo kabaju shoora hoggansaa sadarkaa naannoofi akka biyyaatti isarraa eegamu daran cimsuu fi hirmaannaa ummataa gurmaa’een murtiilee dhaaba keenyaa yaa’ii dhioo kanaatiin darban ga’umsaan hojiirra oolchuudhaan mul’ata Mallas /ADWUI milkeessuuf kutannoo yeroo kamiyyuu caaluun sochiisaa itti fufuuf waadaasaa ni haaroomsa.
Kabajamaa Ummata Oromoo
Kabajamoota miseensotaa fi deeggartoota DhDUO
Dhaabni keenya DhDUO/ADWUIn ummanni Oromoofi walumaagalattiis Sabootaa fi sablammoonni Itoophiyaa waanjoo gabrummaa humnaan isaanirratti fe’amee ture jalaa akka ba’aniifi mirgaafi bilisummaa isaanii akka gonfatan gochuuf wareega guddaa akkuma kafalee turetti, har’as qabsoo guddina biyyaa keessatti adda durummaan shoora hoggansaa ga’umsa olaanaan bahachaati jira. Hoggansa DhDUO/ADWUI kanaan tarriimooleefi kallattiiwwan misoomaa sirriifi bu’a qabeessummaansaanii mirkanaawe qabannee duulli hiyyammaa fi boodatti hafummaarratti eegalle ittifufiinsaan cimaa deemaati jira. Adeemsa kana keessattiis ilaalchaafi kallattii misoomawaan dhaaba keenyaa ummata keenya biratti gadi fageenyaan fudhatamu waan danda’eef sochii farra hiyyummaa hirmaannaa ummataa bal’aan deeggarame uumuufi kallattii hundaan bu’aawwan misomaa jajjabeessaa ta’an galmeessuu dandeenyeerra.
Akkaatuma kanaan waggoota darban keessatti DhDUO fi Mootummaan Naannoo Oromiyaa isaan hogganamu nageenya amansiisaa mirkaneessuuf, bulchiinsa gaarii diriirsuufi misooma saffisaafi ijaarsa sirna dimookraasii milkeessuuf ummata neannichaa sochoosuudhaan tattaaffii itti fufiinsaan taasifamaa tureen bu’aawwan gurguddoo naannoon keenya daandii jijjiiramaa fi guddinaa abdachiisaarra tarkaanfachaa jiraachuu isaa mirkaneessan galmeessineerra. Waggoota muraasaa as ammoo sochii guddinaa abdachiisaa kana gara sadarkaa olaanaa tarkaanfachiisuu fi naamoon keenya haaroomsa biyya keenyaatiif gqooda gaarii akka gumachu dandeessisuuf galmoota misoomaa gurguddoo fi hiixatoo qabannee jijjiirama olaanaa fiduuf bal’inaan sochoo’uu jalqabneerra.
Gama kanaan, karoora Guddinaa fi Tiraansiformeeshinii waggaa shanii sadarkaa biyyaa fi sadarkaa naannoo keenyaatti sirriitti hojiirra oolchuuf sochiin hoggansa dhaaba keenyaatiin adeemsisaa jirru fakkeenyaaf eeramuu kan danda’auudha. Galmoonni karoora Guddinaafi Tiraansifoormeeshinii waggaa shanii adeemsa haaroomsa biyya keenyaa saffisuuf hiikkaan qaban baayyee olaanaa ta’uusaa hubachuudhaan miseensotaa fi deeggartoonni dhaaba keenyaa, walumaagalattiis ummanni naannoo oromiyaa marti karooricha hojiirra oolchuuf kaka’umsi agarsiisaa jiran hedduu jajjabeessaadha. Dhaabni keenyaa DhDUOniis misooma dinagdeefi hawaasummaa hunda keessatti karoorri qabame akkaataa saganteeffamen akka hojiirra ooluu fi bu’aan yaadame akka galmaa’u gochuuf adda durummaan hogganuu ciminaan itti fufeera.
Akkaatuma kanaan, hoggansi dhaaba keenyaafi hirmaannaa Ummataa gumaa’een kutaalee misoomaa hunda keessatti bu’aaleen yeroon itti aanu yeroo milkii ta’uusaa gamanumaa Calaqqisan galmaa’aa dhufanii jiran.
Gama kanaan dhaabni keenya DhDUOn waggoota lamaan darban dandeettii hogganootasaa sadarkaa sadarkaan jiran leenjii adda hin cinneen cimsuufi hojii hordoffiifi deeggarsaa bal’inaan raawwachuuf tumsi gochaa ture cimina hoggansa keenyaat fi bu’aa gama hundaan galmaa’eef ga’ee olaanaa gumaachee jira.
Dhaabbanni Dimookraatawaa Ummata Oromoo ayyaana waggaa 23ffaa hundeeffama isaa kana yeroo kabaju hojiilee jijjiiramaafi guddinaa kallattii hundaan bu’a-qabeessa ta’aa dhufan kana gara sadarkaa olaanaa tarkaanfachiisuufi adeemsa haaroomsa biyya keenyaa daran saffisiisuuf kutannoo qabu ni mirkaneessa. DhDUOn dhaabbata waaraqaa dimookraatawaa yeroo yeroodhaan adeemsa isaa qoratee ciminaafi laafina isaarraa barachaa, dogongora isaa sirreessaa haala adda hincinneen of cimsaa deemu waan ta’eef ayyaana kana yeroo kabaju qophaa’ummaa fi ga’umsa gama hundaan qabu daran guddisee hojiilee misoomaa jalqabaman galmaan ga’uuf shoora hoggansaa isarraa eegamu sadarkaa olaan bahachuuf kutannoosaa irra deebi’ee ni mirkaneessa.
Kana qabataman mirkaneessuufiis gahumsa siyaasaafi dhaabbatumma hoggansa sadarkaa sadarkaan jiruu fi miseensotasaa hundaa daran cimsuufi qaamoota hojii hunda keessatti dandeettii raawwannaa ol guddisuuf gama leenjii hoggansaa fi riifoormii adda addaatiin sochii adeemsisaa ture cimsee itti fufa.
Akka beekamutti waggaa 23ffaan dhaabni keenya DhDUOn itti hundeeffame kabajamaa kan jiru yeroo filannoo naannooleefi bulchiinsa magaalaa adeemsisuuf qophiin itti xumurame keessattiidha. Filannoon jia eblaa dhufu kana keessatti adeemsifamu kun bulchiinsa ummataa sadarkaa sadarkaan jiru cimsuufi dandeettii raawwannaasaanii daran ol guddisuuf hojiiwwan dhaabbanni keenya karoorfate milkeessuuf haala mijaa’aa kan uumuudha.
Akkaatuma kanaan, DhDUOn kaadhimamtoota Sadarkaa hundarratti tajaajiluuf ga’umsa ni qaban jedhee itti amanee fi ummata duratti dhiheessee fudhatama argatan filannoo kanaaf dhiheessee jira. Filannoon kun dimookraatawaa, haqa qabeessaa fi ummafa birati fudhatama kan argate ta’ee karaa nagaatiin akka xumuramu gochuufiis DhDUOn qophii gochaa kan ture yoo ta’u paartiilee siyaasaa naannoo keenya keessa socho’aa jiran waliinis waltajjii uumee milkaa’ina filannichaa tiif bal’inaan hojjachaati jira.
Waan ta’eefiis, ummanni keenya filannoo kanarratti hirmaachuuf bal’inaan ba’ee akkuma galmaa’etti, guyyaa filannichaatiis sirriitti hirmaatee, kaardii isaatiin fayyadamee tora misoomaafi dimookraasii dhaaba keenyaa filachuudhaan sirna mirga ummataa kabachiiseefi guddina saffisaa mirkaneesse kana cimsuuf bal’inaan akka tumsu koreen Giddu Galeessa DhDUO waamicha dabarsa.
Carraa kanaaniis ummanni Oromoo marti fi miseensonni sabaaf sablammota adda addaa naannoo keenya keessa jiraatan hundi akkuma haga ammaa hoggansaa DhDUOtiin daandii guddinaarra deemuudhaan abbaa injifannoo ta’uu danda’anitti kana boodaas milkaa’ina adeemsa haarooma biyya keenyaatiif hoggansi DhDUO/ADWUI murteessaa ta’uusaa hubatanii sochii misoomaa hoggansa dhaaba keenyaatiin jalqaban galmaan ga’uufi mul’ata duree olaanaa keenyaa milkeessuuf yeroo kamiyyuu caalaa tumsuu akka ittifufan DhDUOn waamicha dabarsa.
Miseensotaa fi deeggartoonni dhaaba keenyaa hundiniis fakkeenyummaa kutannoo cimaa duree daanaa keenyaa qabachuu-dhaan sochii guddinaa murteessaa kana keessatti adda duree ta’uudhaan akka sochoo’an DhDUOn waamicha dhiheessaa, yeroon itti aanu yeroo kallattii hundaan injifannoo dabalataa itti galmeessinu, yeroo milkiifi gammachuu akka ta’u hawwii qabu ibsa.
Koree Gidugaleessa Dhaabbata Dimookraatawaa Ummata Oromoo!!
Bitooteessa 19/bara 2005